ဒီနေ့က Pay Day ဆို… ဘာစားရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေသူတွေအတွက် ကိုရီးယားဆိုင်အသစ်လေးရှိတယ် ! 2693 views
လစာထုတ်ခါနီးဆို လူကမရိုးမရွတွေဖြစ်နေတာ ထုံးစံလိုဖြစ်နေပြီနော်။ သူများတွေတော့မသိဖူး အက်မင်တော့အဲ့တိုင်းပဲ။ ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးမှာ လစာထုတ်ပြီး အိမ်ကိုစောစောပြန်ရင် အကောင်ပဲ… သိပ်မိုက်မဲတဲ့အကောင် :P ကိုယ်တော့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုမပြန်ဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားတယ်။ တစ်ခုခုတော့စားကိုစားလိုက်ရမှ ကျေနပ်သွားတဲ့အမျိုးဗျ…. တစ်လလုံးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးမှတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှင့်တဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့…..။ အက်မင်နဲ့အတွေးသူတဲ့သူရှိရင် ဒီနေ့ Pay Day လေးမှာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုလမ်းညွှန်ပေးချင်တယ်။ အဲ့ဒါက ကိုရီးယားခရေဇီတွေအတွက် ‘ပစ်တိုင်းထောင်’ ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားအစားအစာဆိုင်အသစ်လေးပါ။
ပစ်တိုင်းထောင်က (၄၆)လမ်းနဲ့ (၄၇)လမ်းကြားမှာရှိတယ်။ (ပြောမယ်ဆို လူတိုင်းသိတဲ့ နန်းထိုက်နားမှာပေါ့) ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်မှာပါပဲ။ ဆိုင်လေးကမြေညီထပ်ခန်းလေးမှာပဲ။ အပေါ်ထပ်နဲ့အောက်ထပ်တော့နှစ်ထပ်ရှိ တယ်။ အောက်ထပ်ကတော့ရိုးရိုးစားပွဲဝိုင်းထိုင်ခုံလေးတွေနဲ့ပဲ။ အပေါ်ထပ်ကတော့ စားပွဲပုလေးနဲ့ ထိုင်လို့ရမယ့် စတိုင်လေး။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ စကားပြောလို့ကောင်းပြီး အငြိမ် Type လေးပါပဲ။ ထမင်းစားချိန်တွေတော့လူများတတ်တယ်နော့....။
ဒီဆိုင်မှာကိုရီးယားအစားအစာတော့အစုံရတယ်။ တော့ပူကီ၊ ငါးအသားပြား၊ ကင်ချီထမင်းသုပ်/ကြော်၊ ဆူရှီ၊ ကိုရီးယားထမင်းသုပ်၊ ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲပြုတ် အပြင်အခြားမီနူးပေါင်းတော့မနည်းဘူး။ အက်မင်တို့ဘာစားခဲ့ လဲဆို….. ထမင်းသုပ်စားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဝက်ချိုကြော်ဆလပ်ရွက်၊ ကိုရီးယားပီဇာ၊ ကိုရီးယားဝက်နံရိုးပေါင်း အဲ့ဒါတွေပါပဲ။
ကျောက်အိုးပူထမင်းသုပ်ကတော့ အက်မင်စားတာပေါ့။ ကိုရီးယားစာထဲမှာမှ ဒါလေးကို လူကြိုက်များကြတယ်။ အက်မင်လည်း မစားတာကြာပြီဆိုတော့ ဒါလေးပဲမှာလိုက်တယ်။ အရသာလေးလည်းမဆိုးပါဘူး။ အစာပလာတွေလည်း အစုံထည့်ပေးထားတယ်။ အက်မင်က ဝက်သားနဲ့စားတာ။ တစ်ပွဲ(၄၀၀၀)တဲ့။ ကြက်နဲ့ဆိုလဲ (၄၀၀၀)ပဲ။ Seafood ဆိုရင်တော့ (၅၀၀၀)ဆိုလားပဲ။ နောက် ကိုရီးယားပီဇာ ဒါကတော့ ဒီထဲမှာပီဇာကြိုက်တဲ့မမလဲပါတော့ ကိုရီးယားပီဇာဆိုတော့လဲဆွဲပြန်တာပဲ။ သူကတော့ ဝိုင်းထဲမှာ အနှိုက်ခံရဆုံးပဲ။ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ အသီးရွက်လဲအစုံပါသလို အချပ်ကလည်းခပ်ကြီးကြီးပဲ။ သူကတော့ (၃၅၀၀)ပဲ။
အဖွဲ့ထဲပါလာတဲ့တစ်ယောက်က ကိုရီးယားဝက်နံရိုးပေါင်းစားတယ်။ သူကတော့ One Portion ပုံစံလေးပေါ့။ တစ်ယောက်စာလေးပဲ။ ဝက်နံရိုးတစ်တုံးပါတယ်။ အရသာကတော့အချိုလေးပဲ။ အခြားအအီပြေ၊ အချဉ်ပြေ ကင်ချီတို့ ပဲပင်ပေါက်တို့လည်းထည့်ပေးထားတယ်။ သူကတော့တစ်ပွဲ(၄၀၀၀)
ဝက်ချိုကြော်ဆလပ်ရွက် - ဒါလည်း အက်မင်တို့တော်တော်သဘောတွေ့တယ်။ ဝက်သားကိုမှအချိုလေးကြော် ပေးထားတယ်။ အဲ့ဒါကိုမှ အက်မင်တို့က ပေးထားတဲ့ဆလပ်ရွက်လေး၊ ကြက်သွန်ဖြူလေး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးနဲ့ ကင်ချီဘာညာထည့်ပြီးထုပ်စား။ (ကိုရီးယားကားတွေထဲကစားတဲ့အတိုင်း စားကြည့်တယ်ပေါ့) မဆိုးဘူးဗျ… တော်တော်လေးတော့စားကောင်းသား။ အရသာကအချိုဖြစ်ပေမယ့် အခြားအစာလေးတွေနဲ့ထုတ်စားတော့ အချဉ်လေးနဲ့ အစပ်လေးပါပါပြီး အရသာကမျှသွားတယ်ပေါ့။ ဒီဆိုင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် အဲ့ဒါလေးစားခဲ့ကြနော်။ သူကလည်း (၄၀၀၀)ပဲ။
ကိုယ်တွေစားခဲ့တဲ့ဟင်းပွဲတွေက အချိုတွေချည်းမှာလိုက်သလိုဖြစ်သွားပေမယ့် သူတို့ချပေးတဲ့ ကင်ချီ၊ ပဲပင်ပေါက်နဲ့ ဆလပ်တွေနဲ့တွဲစားရင်တော့ အရသာက အတော်သင့်အဆင်ပြေသွားတယ်။
အအေးကတော့ Kiwi Juice ချဉ်သလို ချိုသလိုဟာလေးသောက်ခဲ့တယ်။ Apple Juice လည်းကောင်းတယ်။ ဖျော်ထားတာလေးက ပန်းသီးကိုဖျော်ထားမှန်းတောင်သိပ်မသိသာဘူး။ အရသာကပျော့ပျော့လေးပဲသွားတယ်။ နောက် Orange Juice လေးလည်းမိုက်တယ်။ ဒီဆိုင်ကအအေးတွေကိုကြိုက်တာက အချိုအရမ်းမများဘူး။ အရသာတွေက ပြေပြေလေးတွေ၊ ပျော့ပျော့လေးတွေပဲသွားတယ်။
သတိထားမိတာတော့ ဆိုင်ကနှစ်ချိန်ဖွင့်တာဗျ။ မနက်ပိုင်းမှာ (၁၁)နာရီကနေ (၂)နာရီအထိတစ်ခါဖွင့်တယ်။ နောက် (၄)နာရီကနေမှ ည(၁၀)နာရီထိတစ်ခါဖွင့်တယ်။ ဈေးနှုန်းလေးတွေနဲ့ မီနူးတွေလေ့လာလို့ရအောင်လဲ ဓါတ်ပုံလေးတွေရိုက်ခဲ့ပေးပါတယ်။ ဒီဆိုင်က တိတိကျကျပြောရင် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်၊ (၄၆)လမ်းနဲ့ (၄၇)လမ်းကြားမှာရှိတယ်။ ဆိုင်ကလည်း Service ကောင်းပါတယ်။ 09-773200500, 09-964742013 ဒါတွေကတော့ ဆိုင်ဖုန်းတွေပါ။
ကိုရီးယားအစားအစာကို အသည်းစွဲကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ဆိုင်သစ်လေးတစ်ဆိုင်ညွှန်းပေးခဲ့ပြီနော်….
#Pyit_Tine_Htaung #Korean_Restaurant #Korean_Restaurant_in_Town #Korean_Cuisine